Ngwaọrụ etemeete, ahịhịa etemeete, ahịhịa ịkpụ afụ ọnụ - Dongmei
Nabata na DongShen
Dongshen ọhụrụ imewe etemeete ahịhịa set 14pcs silv ...
Okomoko ewu ntutu ịchọ mma ahịhịa ọkachamara 15 ...
Ọmarịcha etemeete ọkachamara 13pcs akpụkpọ anụ -...
Elu àgwà ọkachamara etemeete ahịhịa 12pcs fi ...
Ngwaahịa ngwa ngwa mbupu nwa 11pcs ewu ntutu p ...
Ọkachamara 8pcs dị nro sịntetik sịntetik ...
Soft akpụkpọ-enyi na enyi gburugburu ogbo etemeete rụrụ po ...
Dongshen ọkachamara ewepụghị n'elu sịntetik ntutu m ...
Dongshen ahịhịa N'ogbe Blue resin emefu Dura ...
Dongshen okomoko adịchaghị obi ọjọọ-free eriri synt ...
Dongshen ịkpụ ntutu kacha mma baajị ntutu acha anụnụ anụnụ re ...
Dongshen N'ogbe omenala onwe labelụ top qua ...
Dongshen elu mma eke sturdy abụọ gbalaga b ...
Dongshen onwe labelụ N'ogbe omenala resin h ...
Dongshen ahịhịa elu mma eke ibu baajị ...
N'ihe karịrị ndị ọrụ 100, ụlọ ọrụ Dongshen na -ekpuchi mpaghara 15,000㎡. Anyị nwere ndị otu ọkachamara na -ere ahịa, otu teknụzụ na otu imewe dị ike, nke dị mma na nyocha na mmepe.
1. Ọ kacha mma ịhọrọ ntọala mmiri mmiri. Agbanyeghị na a na -eji ahịhịa ntọala ahịhịa ahịhịa, ọ bụghị textures niile nke ntọala nwere ike ịchacha ntọala zuru oke. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịzere akara ahịhịa, mgbe ahụ ọ kacha mma ịhọrọ ntọala mmiri mmiri. N'ihi na ntọala mmiri mmiri bụ ve ...
Mgbe m bụ nwata, a na m eso ndị okenye gaa ebe a na-akpụ isi nke steeti, n'ihi na amalitebeghị m ito afụ ọnụ n'oge ahụ, enweghịkwa m ọfụma ọ bụla, yabụ enwere m ebe nchekwa miri emi. nke usoro ịkpụ afụ okenye etina. Nzọụkwụ dị ka t ...
Enwere ọtụtụ narị ụdị brushes n'ahịa, nke dị ọnụ ala bụ 30, ọnụ ahịa ya sitere na puku abụọ ruo puku atọ ma ọ bụ karịa. Otu ihe ahụ bụ ahịhịa, kedu ihe dị iche? Ọ dị mkpa imefu ọtụtụ puku dollar na ahịhịa maka obere nkeji 1 kwa ụbọchị? Ma ọ bụ mmadụ nwere ike zụta ...
Ntọala ịkpụ afụ ọnụ, etemeete ahịhịa setịpụrụ, Ịkpụ afụ ọnụ, Mee Ncha, Nịm etemeete ahịhịa, Ngwá Ọrụ Nchacha etemeete,